ငွေလမင်း: Singapore နိုင်ငံတွင် လိမ်လည်မှုတစ်ခု
Posted by ငွေလမင်း at 11:08 AM
'ကိုယ်ကကျူး ကိုယ့်ဒူးတောင်မယုံနဲ့' ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားကို သတိရမိတယ် ငွေလမင်းရေ။ ခက်တာက ဒီခေတ်ကြီးမှာ နေရာတိုင်း ကိုယ်တိုင်သွားလာဖို့က မလွယ်ကူလေတော့ အေးဂျင့်ကိုပဲအားကိုးရပြန်တယ်။
နိုင်ငံခြားမှာက စာအုပ် ကကိုယ့် အသက်လေ
လူလိမ်တွေကတော့ ကြာလေ ပေါလေပဲ
ကျွန်တော်ဖြင့် စာအုပ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံဘူး။
သူများ ချွေးနဲစာနဲ့ ရှာထားတာကို...
ဒီိလို ကိုယ်ကျိုးရှာ တတ်တဲ့ လူလိမ်တွေကြောင့် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်စားသူတွေ အခက်တွေ့ ရတာ...
ဇတ်တူသား စားတဲ့ကောင်... လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်...
ကိုယ်ချင်းစာ တရားဆိုတာ နားမလည်တဲ့ ကောင်...
သူတစ်ပါး သောကနဲ့ ထမင်းစားချင်တဲ့ကောင်...
မြန်မာသံရုံကို ၃-ရက်တောင် သွားရတာဆိုတော့လည်း ဒီမှာက ခွင့်ယူဘို့ က ခက်ပြန်ရောလေ။
မြန်မာတွေ ခွင့်ယူရင်ကို အပြစ်ရှာခြင်နေကြတာ။
တိုင်းပြည်မြန်မြန် တိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ ဟူး
တာဝန်ခံတဲ. ဒေါ်သန်းသန်းနုဆိုင်က ပိုက်ဆံပြန်အမ်းရမှာပေါ. လူတွေက သူ.ဆိုင်ကိုသွားအပ်တာလေ သူ.ဟာသူဘယ်သူ.ကို တဆင်. ပေးပေးပေါ.နော်